re-subscription ကိုPHOTORECOVERY®ဆော့ဝဲ Mac အတွက်နဲ့ PC | Data Recovery
re-subscription ကိုPHOTORECOVERY®ဆော့ဝဲ Mac အတွက်နဲ့ PC
နေအိမ် → re-subscription ကိုPHOTORECOVERY®ဆော့ဝဲ Mac အတွက်နဲ့ PC
PHOTORECOVERY® PRO has all of the great features of PHOTORECOVERY®, but it also includes Digital Media Doctor® for Performance Testing and Media Restoration. သငျသညျလျင်မြန်စွာ Backup ကိုတတ်နိုင်သမျှ, သုတ်, format, ကာရန်သူတို့အားအသုံးပြုသောဒစ်ဂျစ်တယ် memory card Restore “အသစ်ကဲ့သို့” စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်အထိ. သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကတ်များကိုအစားထိုးသည့်အခါသင်သိပါလိမ့်မယ် – ဒါဟာသိပ်နောက်ကျမယ့်ရှေ့တော်၌ငါသိ၏!
You can renew your subscription to PHOTORECOVERY PRO® at half of the retail price! အောက်တွင်မှအထက်ဝယ်အခုတော့ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ $30!
Windows ကို Software များ *
PHOTORECOVERY နျ Standard Windows ကို $20.00
PHOTORECOVERY Pro ကို Windows အတွက် $30.00
Mac အတွက်ဆော့ဝဲ *
PHOTORECOVERY နျ Standard Mac အတွက် $20.00
PHOTORECOVERY Pro ကို Mac အတွက် $30.00
*Mac OS X မှာ 10.8 သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်
&amp;ဒု;div style =”ပြသ:တန်းဝင်ကာစီသည်;”&amp;GT;
&amp;ဒု;img height =”1″ အကျယ် =”1″ စတိုင် =”border-style:အဘယ်သူအားမျှ;” alt =”” src =”https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/1072639940/?တနျဖိုး = 0&amp;amp;amp;တံဆိပ် = gLZ6CPr08gIQxN-8_wM&amp;amp;amp;GUID = ON&amp;amp;amp;ဇာတ်ညွှန်း = 0″/&amp;GT;&amp;ဒု;/div&amp;GT;